Izizathu zokuba kutheni ungafanele ubambe eyakho ividiyo | Martech Zone
Izizathu zokuba kutheni ungafanele ubambe eyakho ividiyo
NgoLwesibini, Agasti 12, 2014 NgoLwesibini, Meyi 3, 2016 Douglas Karr
Umthengi owenza umsebenzi omangalisayo kwicala lokupapasha kunye nokubona iziphumo ezizodwa ezibuzwayo ukuba loluphi uluvo lwam ngabo bokubamba iividiyo zabo ngaphakathi. Bavakalelwa kukuba banokuwulawula ngcono umgangatho weevidiyo kwaye baphucule nokwenza kwabo uphando.
Impendulo emfutshane yayinguhayi. Ayisi kuba andikholelwa ukuba baya kuba nkulu kuyo, kungenxa yokuba bayayijongela phantsi yonke imiceli mngeni emangalisayo yevidiyo ebanjelwe esele isonjululwe kwenye indawo. YouTube, bedlala, Wistia, Ukukhanya, kunye neendidi ze Management Asset Digital iinkampani sele zisebenze ngemiceli mngeni emininzi yevidiyo ebanjiweyo:
Iibhendi zebhendi -Ngaphezulu kwayo nayiphi na indawo ekuyo imeko, i-bandwidth spikes ngumba omkhulu ngevidiyo. Ukuba enye yeevidiyo zakho yenzeka yintsholongwane… ayisiyongxaki ilula kwaye unokufuna amaxesha ali-100 okanye nangamawaka ali-1000 umda wokuhamba ukuze uqhubeke nemfuno. Ngaba unokucinga ukuba ekugqibeleni uza kufumana ividiyo yakho phaya emva koko umdlali wonke umntu ayatsiba kwaye ayame njengoko bezama (kwaye belahla ukudlala kwakhona)?
Ukufunyanwa kwesixhobo - amaqonga okubamba ividiyo ngelifu aya kukhangela uqhagamshelo kunye nendawo ekujongwa kuyo ukuze wenze umgangatho wevidiyo kubabukeli bakho. Oko kubonelela ngamava omsebenzisi obalaseleyo kubasebenzisi abanonxibelelwano olukhawulezayo okanye uqhagamshelo olucothayo ngokufanayo. Ayisiqinisekisi kuphela ukuba ividiyo isasazwa ngokukhawuleza okukhulu, ikwanciphisa ukusetyenziswa kwebhendi yakho.
Iimpawu zomdlali -Ukwazi ukongeza iindawo ezinobushushu, iifom, ukubizela ezenzweni, iitickers, ii-intros, ii-outros… uluhlu lweempawu ezibandakanyiweyo kubadlali abasasazwayo luyenyuka kuba amaqonga evidiyo abanjelwe onke amaqela abaphuhlisi asebenzela ukuqhubela phambili izibonelelo zala maqonga yonke imihla. Iinkampani zihlala zijonga ukusingathwa kwevidiyo njengeprojekthi apho ziyijonga kuluhlu kwaye ziqhubele phambili… kodwa obu bubuchwephesha obufuna ukukhula okuqhubekayo kunye nolondolozo njengoko izixhobo zitshintsha, ukufikelela kutshintsho lwebhendi kunye nokuthandwa kweempawu eziguqukayo. Iinkampani ziya kuhlala zingemva xa zizama ukuphuhlisa oku ngaphakathi endlwini.
Uhlalutyo lweSiza esiNqamlezileyo -Ubani omilisele umdlali wakho? Ijongwa phi? Zingaphi iimbono ezinazo? Zijongwe ixesha elingakanani iividiyo zakho? Ividiyo kubahlalutyi ibonelela ngengqondo engakholelekiyo kwindlela abasebenzisi abazisebenzisa ngayo iividiyo, nokuba bathatha inyathelo ngokusekwe kubo. Njengawo nawuphi na umxholo, kubahlalutyi kubalulekile ukuba uhlengahlengise isicwangciso sakho somxholo kwaye ulungiselele abaphulaphuli bakho.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando Ininzi into ebhaliweyo malunga nayo ukwenziwa kwevidiyo sele… kodwa eyona nto iphambili kwiziphumo zethu kukuba iinjini zokukhangela azilindelanga, azicebisi, kwaye aziboneleli nzuzo kwiinkampani ezibamba ividiyo yazo. Ngelixa ukuthandwa kwevidiyo kuyakuxhamla kwisikhundla sayo, ividiyo ebethelelwe kwiphepha elinombhalo oxhasayo kunye nemifanekiso iya kubekwa ngokulinganayo, ukuba ayingcono, kunephepha levidiyo. Kwimeko enqaku yiYouTube. Sinamaphepha kule ndawo eneevidiyo ezifakwe kwi-Youtube ezikumgangatho ongcono kunephepha le-Youtube kuba zilungiselelwe ngomxholo wokuxhasa.
Isebenza njani iVidiyo yokuHamba
Bukela ividiyo emfutshane esuka eWistia ngendlela ividiyo yokubamba esebenza ngayo kwiposti yethu.
Iiplatifti zokubamba ividiyo zinenani lezinye izinto, kubandakanya ukugcinwa okungathethekiyo, ukudityaniswa kunye neqonga lolawulo lweprojekthi, ukupapasha kwamanye amaqonga evidiyo, ukuvelisa ukutya kwevidiyo kokubhalisela kwaye kubandakanya nezixhobo zeqela lesithathu (njengezicelo zeselfowuni), ukuhambisa ngokuzenzekelayo, iingxelo ezithunyelwe nge-imeyile, ukukhangela amathala eencwadi, ukumakishwa kwevidiyo kunye nokwahlulwahlulwahlulwahlulwahlulwahlulwahlulo, ukwenziwa kwe-thumbnail yevidiyo, kunye nokukwazi ukutyhala izaziso zokupapasha kwinethiwekhi yakho yoluntu. Zonke ezi zinto zinokufuna ukuba ziphuculwe kwakhona ukuba unqwenela ukubamba apha ekhaya-ngumsebenzi omkhulu lowo.
Nge-Youtube eyinjini yokukhangela yesibini ngobukhulu, nokuba ndisebenzise inkonzo enomdlali ongcono kunye nomgangatho, bendiya kubamba kwaye Lungiselela ividiyo yam kwiYouTube, Yongeza Ukukhutshelwa kwevidiyo ukungqubana nomxholo kwiphepha lakho levidiyo kwaye uqinisekise ukuba uyafumaneka!
Ngamafutshane, andicebisi abantu ukuba bamba iividiyo zabo. Ndiqinisekile ukuba ukusilela kweeprojekthi ezijamelene neenkampani ezininzi xa kufikwa kuphuhliso kunye netekhnoloji yinto ende. Gxila kwi-bailiwick yakho. Ukuthatha ixesha lokuphinda wenze into abanye abasebenza kuyo yonke imihla akunangqondo. Ngelixa iindleko ziye zehla kwaye iitekhnoloji ziphucule ukwenza i-BYO (yakha eyakho) inokwenzeka, kusekho isiseko esishukumayo kumashishini amaninzi. SIcebisa iinkampani ukuba zakhe ubuchwephesha ngaphakathi xa kusengqiqweni-ukudibanisa nabanikezeli benkampani yesithathu apho kusengqiqweni.
Ividiyo iqhuma ngokuthandwa ngoku… ukubambelela kumboneleli wefu we-SaaS ozinikezele ekuqhubekiseleni phambili amava kunye nezixhobo ezininzi ngakumbi sisikhokelo esifanelekileyo sokuhamba… namhlanje.
tags: ukukhanyaIvidiyo yeshishiniividiyo ebanjiweyoukusingathwa kwevidiyouhlalutyo lwevidiyoIindleko zevidiyoIimpawu zevidiyoyokubamba ividiyoIimpawu zomdlali wevidiyoividiyo seobedlalaisilumkoyoutube
Ilizwe lokuJongwa kweMithombo yeendaba yezeNtlalontle kunye noHlaziyo
Agasti 17, 2014 kwi-8: 44 AM
Inqaku elihle, ndiyayithanda indlela oyichaze ngayo!